Tababare Barzakh Android: Sida loo Barzakh SD Card u Android
Computer, kaarka SD, iyo telefoonada gacanta waa meelo ay ku kaydiso files, laakiin awoodda kuma filna sida aad u badan oo ah qalab ku sameeyo. Markaas waxaad qorshaynayaa in xijaab.
Qeybta 1: Waa Maxay Barzakh, iyo Maareeyaha Barzakh Android Qeybta 2: Sida loo Barzakh SD Card u Android
Qeybta 1: Waa Maxay Barzakh, iyo Android ah Barzakh, Manager
Risaalo A si fudud waa kala qaybsamay macquul ah ee ballaaran lagu kaydiyo ama xasuusta galay hoosaadyada go'doonsan. Tan waxaa caadi ahaan sameeya si ay uga caawiyaan yareeyo culeyska ka mid ah kaydinta gudaha qalabka. Si kale haddii loo dhigo, dadka inta badan la abuuro qoruhu ku Card SD ah si loo badbaadiyo meel dheeraad ah oo ku saabsan kaydinta gudaha. Partitioning caawin kara si kor loogu qaado tayada shaqo disk aad. Waxaa intaa dheer, waxaa la sheegay in ay xijaab dedejin kartaa nidaamka qalliinka Android ay farqi weyn.
Tababare Barzakh Android
The Manager ah Barzakh, Android si fudud waa codsi ah u saamaxaya in aad nuqul ka, flash iyo tirtirto qoruhu qalabka Android aad. Habka partitioning card SD aad ka caawisaa in ay lacag la'aan ah ilaa meel iyo rakibi barnaamijyo badan oo ku saabsan qalab aad.
Qeybta 2: Sida loo Barzakh SD Card u Android
In tutorial this, waxaan u qaadan doonaa in aad talaabo talaabo nidaamka partitioning card SD ee qalabka Android aad, si aad u ordi karaan barnaamijyada ka.
1. Waxyaabaha Diyaar / Shuruudaha
* Android Gingerbread, Jelly Bean ama rooti jalaato: waxaa loogu talagalay si loo horumariyo xawaaraha, kordhiyo nolosha batari Android, maamulka codsiga fiican iyo in la hagaajiyo waayo-aragnimo ciyaaraha.
* Box mashquul: Tani waa app gaar ah in aad rakibto qalabka Android aad si laguu siiyo qaar ka mid ah amarrada Linux ku salaysan oo dheeraad ah. Waxaad u baahan tahay in ay app this rakibay tan iyo qaar ka mid ah amarrada muhiim ah in aan la heli karo iyo in aad u baahan doonaa hawlaha rooting.
* Smartphone A
* Ayaa ah Barzakh, saaxir MiniTool (waxaa lagala soo bixi karaa online)
* An 8 GB ama ka badan Micro SD Card
* Link2SD: Tani waa codsi anfacaya oo awood aad si barnaamijyadooda wareejiyo card SD ah. Waxaad u isticmaali kartaa si ay u maareeyaan, liiska, sort, dayactirka ama codsiyada bandhigay. Haddii aadan haysan qalab Link2SD, waad ku rakibi kartaa ka Play Google Store.
* Swapper 2 (isticmaalayaasha Root)
Ka hor inta aanad bilaabin, halkan waa digniin ah.
Marka hore, waxaad u socotaa qaab card SD aad. Sidaas, hubi in dhammaan faylasha aad hadda aad u badbaadiseen waxaa lagu xoojiyaa ee drive computer adag. Dib ugu kaliya ee files muhiim ah haddii uma baahnid in aad meel ku filan oo lacag la'aan ah ayaa diyaar u ah wax kasta oo kaarka SD aad.
Labaad, waxaad u baahan tahay inaad ka rujin aad casriga Android si taasi ay u shaqeeyaan; afjarno kala duwan aallada kastana wuxuu ku socda nidaamka qalliinka Android. Waa in la ogaadaa in ay tani waa hab aad u qatar ah in wada baabbi'in ama booli iyo aad telefoon iyo noqoto damaanad. Shirkadaha saarka phone intooda badan ay qaataan mas'uuliyad ma aha haddii ay dhibaatada waxaa keena afjarno. Sidaa awgeed, ka rujin aad casriga ah ee aad halis gaar ah.
2. Tallaabooyinka Root Android
Ugu horeyn, waxaad u baahan doontaa in lagu furo aad bootloader. Si ay u badbaadiyaan kuwa aan aqoon u leh verbiage Android bootloader, aynu heli aasaaska qaar ka mid ah jidka ugu horeysay. Bootloader A muhiimad ahaan waa hab loogu talagalay in lagu baro yaruna nidaamka qalliinka si caadi ah Boot. Waxaa sida caadiga ah qufulan on aalad Android sababta oo ah soo saaraha uu doonayo in uu aad u xaddido in ay version Android Operating System. Iyadoo bootloader xiran on qalab aad, waa ku dhawaad ​​suurto gal ahayn in ay ka soo widhwidha ROM caado aan u furo. Dalbashada xoog badan tahay waxaa laga yaabaa in qalab aad gabi ahaanba ka baxsan jebin dayactir.
2.1 Tilmaan in lagu furo Bootloader
Fadlan ogsoonow: Hagaha waxaa loogu tala galay aaladaha Android la Stock Android OS kaliya sida Google Nexus. Stock Operating System Google waa yaruna ee Android aan user interface Ebana UI.
Talaabada 1: Download iyo rakibi Android SDK ku saabsan nidaamka.
Talaabada 2: Marka aad soo bixi oo lagu rakibay SDK ah, hoos u qalab aad xidhay iyo guuleysatey waa in hab bootloader. Halkan waxaa ah sidii aad u samayn kartaa:
* Nexus Mid ka mid ah: Press iyo hay badhanka trackball iyo awood isku mar
* Nexus S: Press iyo kor u mugga iyo batoonka
* Galaxy Nexus: Press iyo qaban batoonka, hoos mugga iyo mugga hoos waqti isku mid ah
* Nexus 4: Volume hoos iyo awood button
* Nexus7: Volume iyo awood isku mar
* Nexus 10: Volume hoos, kor u qaadaysaa codka iyo awood button
Talaabada 3: Isku telefoonka Android ama kiniin ah in aad PC via USB ah oo ku sii bukaanka ilaa wadayaasha oo dhan waxaa lagu guul leh ku rakiban. Tani waxay badanaa ka dhacdaa si toos ah.
Talaabada 4: Marka dhammaan darawallada waxa loo xiraa, u tag interface terminal ku saabsan amarka PC / degdeg ah oo ku qor socda amarka dhakhso-boot Unlock OEM.
Talaabada 5: Hadda Press galaan iyo qalab aad ku tusi doonaa shaashadda ah in aad soo wargelin doonaa saabsan furo bootloader. Si taxaddar leh u dhex maraan tilmaamaha shaashadda iyo xaqiijin adigoo riixaya mugga ilaa button iyo batoonka mid kale ka dib markii ay.
Hambalyo! Hadda waxaad si guul ah kusoo quful bootloader ku qalab Android aad.
Fiiro Gaar ah: Wixii qalabka Android la non-stock Android, aad rabto in aad kala soo bixi qalab furo ka website saaraha ee. Tusaale ahaan, goobta rasmiga ah HTC ayaa qayb meesha aad kala soo bixi kartaa SDK ah. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay in la ogaado model ee casriga ah. Si kastaba ha ahaatee, website Samsung ma bixiyaan adeegan, laakiin waxaad ka heli kartaa furo qalabka qalabka Samsung. Waxaa kaloo jira qalab aad u isticmaali karto in lagu furo aad Sony bootloader mobile. Mar kale, hubi inaad soo dajiyo version loogu tala galay oo si gaar ah u model telefoonka aad. Wixii LG users dukaamada waaweyn, nasiib darro, ma jiro wax qaybta rasmiga ah in ay bixiyaan adeegan waa. Laakiin waxaad isku dayi kartaa cilmi online.
2.2 xidid Your Android
Hadda oo aad quful bootloader ah, waxaa haatan la joogaa waqtigii si wada rujin qalab Android aad. Haa, helo xididka laga furay oo siidaysay qalab ay gacantooda ka soo saaraha ee. Mar kale, waxaad u leeyihiin in ay si dhab ah taxaddar marka ficilkan.
Farsamo ee soo afjarno qalab Android kala duwan qalab qalab, oo ku salaysan ay soo saaraha ama version of Android. Nasiib wanaag, waxa jira hab universal rooting laga heli karaa si aad u isticmaasho. Waxaad isticmaali kartaa kuwan soo socda nidaamka rooting universal kiniinka la shiidaa oo dhan loo jecel yahay Android iyo taleefannada gacanta, iyo sidoo kale qaar ka mid ah kuwa si caddaalad ah ku yar yahay. Sidaas, waxa aad u baahan tahay inaad samayso waa isku day inaad ka soo baxay habka soo socda.
• Waxa kale oo aad ka rujin karo SuperOneClick. Wixii habkan, waxaad u baahan doontaa inaad kala soo baxdo nooca ugu dambeeya ee SuperOneClick oo u badbaadin doonaa in aad laptop ama desktop.
• Isku aad Android inay your computer.
Digniin: Marna dalka buuraha leh kaarka SD ku on your computer; Habka ugu ammaansan oo kaliya ay leeyihiin waxay ku xirnayn. Mar kale, u tag Settings iyo awood debugging USB.
• Ugu dambayntii, dhufatey "Root" button on SuperOneClick. Si kastaba ha ahaatee, haddii qalab aad leedahay qufulka NAND ah, waxaa dhici karta in uu furo. Xaaladaha noocaas ah, guji Shell Root button halkii button Root. Eeg sawirka hoose.
• Marka aad riixi Button ah xididkii ka, waxay qaadan kartaa in muddo ah ka hor habka la dhammeeyo. Marka la dhammeeyayna, hubi inaad reboot qalab aad.
3. ah Barzakh, Kaarkaaga SD
Tani waa tusaale ka mid ah 16 kaarka SD GB Micro, laakiin waxaad dooran kartaa size aad doorbiday inta ay ka badan tahay 8 GB. Si taxadir leh u raac tilmaamaha oo dhan in ay ka fogaadaan wax kasta oo dhibaato ka iman kara. Mar kale, this post masuul magdhow kasta oo xayaysiiso in aad telefoon, SD Card ama Micro hardware ma noqon doonto.
Ugu horeyn, xiriiriyaan Card SD in aad PC isticmaalaya adabtarada ah ka dibna MiniTool furan Manager Wizard Barzakh. Sidii hore loo sheegay, aad online u soo bixi kartaa.
Card SD waa in la tusay iyadoo shan qoruhu. Mid ka kaliya ee aad u baahan tahay in ay xooga saarto waxaa ah xijaab 4 taas waa in loo magacaabo FAT32. Waxaad u baahan doontaa in resize xijaab si size aad door bidayso. Tani waxay noqon doontaa drive ugu weyn ee meesha Android iyo inta kale ee files ah loo hayn doonaa.
Dooro: Samee sida Hoose. Go'aanso size ee xijaab tani ay ka saaritaanka dibadda ku saabsan 32MB aad xijaab isku bedelasho iyo 512MBs aad codsiyada ka size ugu badan. The 512 xijaab waa in la dhigay ext4 ama ext3. Risaalo 32MB ayaa lagu tilmaamay karo sida isku bedelasho ah. Si kastaba ha ahaatee, ROM gaar ah waxaa laga yaabaa in ka 32 u baahan tahay tiro kala duwan gooni ahaantood, sidaas, mar kasta raac wax kasta waxaa lagu talinayaa in aad sameeysa ROM.
Hadda waxa aad haysatid oo dhan intii kaarka SD Micro qoondeeyo mid ka mid ah 3 qoruhu, riix "codso" button oo sug u dhammayn nidaamka. Si kastaba ha ahaatee, hubi aad u dhigay file ku haboon hab-FAT32 iyo Ext2 oo labadooduba way sameeyay sida PRIMARY.
Sug u dhammayn nidaamka.
Geli dib kaarka SD si aad u telefoonka gacanta oo reboot. Hadda oo aad u wareegeen on telefoonka, waxaad tagtaa Google Play Store oo kala soo bixi Link2SD. Ka dib marka aad ku rakibtay app, waxaa laguu keenay in doonaan in ay doortaan dhexeeya ext2, ext3, ext4 ama si FAT32.In fiican u shaqeeyaan, waa in aad doorato ext2. Risaalo ext2 waa meesha codsiyada lagu rakibi doonaa.
Marka qoraaladii ah ayaa loo abuuray, guuleysatey hab xaq qalab aad. Fur link2SD iyo haddii fariinta ma tilmaamayso, waxay ka dhigan tahay in aad ku guulaysato. Haddaba tag in Link2SD > Settings > Hubi-link auto . Tan waxaa loo sameeyey si toos ah u soo guuraan Dalka Chine dib markii la rakibey inay xijaab ext4 ah.
Si aad u ogaato xusuusta, guji "Kaydinta Info". Tani waa inaad tustaa gobolka ka jira ka mid ah xijaab ext2, FAT3 iyo xusuusta gudaha ee guud ahaan.
Photos Android kaabta in PC & Cloud
SMS Android kaabta si / PC SD Card
Xiriirada Android kaabta in PC & Cloud
Content kaabta ka Android inay PC
Kaabta & Soo Celinta Android Phone 1 Click
Dhoofinta Music Lugood in Android Phone
Lugood u Android Tool in Maamul Android
Top 3 Desktop Lugood Alternative for Android
Top 7 Lugood Apps u Device Android
Android ka Bedelka SMS si iPhone
Xiriirada ka BlackBerry dhaqaaq Android
Top 11 MP3 Samsung Players iyo Apps
Update Manager Android: Hel Performance wanaagsan ee aad Android Phone
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Xiriirada on HTC ugaar
Sida loo soo dejinta vCard Multiple galay Muuqaalka
Sidee inuu ka soo kabsado tirtiray Photos ka HTC yaabiyo 4G
> Resource > Android > Manager ah Barzakh, Android: Sida loo Barzakh SD Card u Android